Otu esi etinye ihe nchọgharị SQLite 3 na SQLite 3 na Ubuntu 20.04 - WebSetNet
July 4, 2021 June 15, 2021 by Jọshụa James
Wụnye ihe nchọgharị SQLite3
Mepee ihe nchọgharị SQLite3
SQLite bụ n'efu, sistemu njikwa nchekwa data dị fechaa (RDBMS) n'ọbá akwụkwọ C. SQLite abụghị igwe nchekwa data nke ndị ahịa. Kama, etinyere ya na mmemme ngwụcha. N'ụzọ bụ isi, asụsụ mmemme niile na-akwado SQLite, nke otu asụsụ si etinye mmemme bụ faịlụ nwere ndọtị .sqlite3/.sqlite/.DB. Akụrụngwa bụ nhọrọ a ma ama maka nchekwa mpaghara/ndị ahịa dị ka ihe nchọgharị weebụ, ngwaọrụ gam akporo na ọtụtụ ndị ọzọ. Ndepụta a sara mbara nke ukwuu.
SQLite Browser bụ ihe eserese na sọftụwia efu maka ịzụlite na chepụta ọdụ data SQLite.
Ntuziaka na-esonụ ga-egosi gị otu esi etinye SQLite3 na ihe nchọgharị na Ubuntu 20.04.
Ubuntu OS arụnyere, onye ndu na-etinye ngwanrọ na Ubuntu 20.04 Focal. Agbanyeghị, Ubuntu 20.10 na 21.04 ntuziaka ga-arụkwa ọrụ maka ya. Tupu ịwụnye, jide n'aka na ị na-emelite na sistemụ gị.
Ọbá akwụkwọ ndabara nke Ubuntu na-abịa na SQLite. Tinye iwu a ka ịwụnye ngwugwu dabara adaba.
A ga-etinye ngwugwu ndị a.
Mgbe ị wụnyechara ngwugwu nchekwa data SQLite3, ugbu a ị nwere ike iwunye ihe nchọgharị GUI. Nke a bụ mmemme dị mfe nke na-eme ka ọ dị mfe ịnyagharịa ọdụ data.
Wụnye ihe nchọgharị SQLite3 site na iji iwu a.
A ga-eji ihe nchọgharị SQLite3 tinye ngwugwu ndị a.
Iji malite ihe nchọgharị nchekwa data, buru ụzọ gaa na ngwa ngwa Ubuntu gị wee chọta mmemme ahụ.
N'ikpeazụ, ị ga-ahụ nsonaazụ ya na ihe nchọgharị ahụ. N'ebe a, ị nwere ike ịhazigharị, mepụta ma gbanwee ọdụ data SQL Lite gị.
Ị tinyela SQLite 3 na SQLite 3 Browser nke ọma.
Ntuziaka ahụ egosila gị nhazi maka ịwụnye ihe nchọgharị na nchekwa data. Maka ozi ndị ọzọ ka esi eji SQLite wuo ngwa, gaa na SQLite 3 Tutorial.net ndu. N'ozuzu, SQLite 3 bụ isi mana dị ike. Otú ọ dị, ọ dị mma maka obere weebụsaịtị maka nnukwu weebụsaịtị na-eto eto iji lelee MariaDB, MongoDB na PostgreSQL, n'etiti ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ.
Otu esi etinye MongoDB Community Edition na Debian 10 Buster